Swing2App: The Ultimate No-koodu App Development Platform | Martech Zone
Enwere ihe akaebe zuru ezu banyere ebe ngwa ngwa eji eji ekwentị eme ihe. Ọ bụrụ na ọ bụghị otu narị, enwere opekata mpe otu ngwa maka ebumnuche ọ bụla.
Ma n'agbanyeghị nke ahụ, ndị ọchụnta ego na-asụ ụzọ ka na-enyocha ụzọ ọhụrụ iji banye egwuregwu agagharị. Ajụjụ ị ga-ajụ bụ: -
Olee otú ọtụtụ ndị ọhụrụ ulo oru na oru buu igba n'ulo nwere ike n'ezie imeli omenala ụzọ nke ngwa mmepe?
Ọbụghị naanị na mmepe ngwa ngagharị na-ewepụ ma na-eri oge, mana ọ na - abawanye oge na ahịa. Mmalite nke echiche ndị nwere ike ghara ịnwe ohere ịhapụ uru onye mbu.
Tinye no-koodu ngwa okike nyiwe, ọhụrụ nwa nke mobile ngwa mmepe.
Enweghị ndị na-ewu App na-eme ngwa mmepe na-adị mfe
Na enweghị ndị okike ngwa okike, echiche ndị otu na obere mmalite gbanwere nke ukwuu n'iwebata ọhụụ ha n'ahịa ngwa ngwa mkpanaka.
Ihe dịbu ọnụ na nke SME na mbido agaghị eru, ugbu a ka onye ọ bụla nwere ngwa mkpanaka ga-ejide ya. Na - ihe were ọnwa ole na ole na ikwughachi oge niile ga - ekwe omume ugbu a na nkeji.
Ngwa Swing2 bụ ihe ịtụnanya ngwá ọrụ nke na-eme ihe niile dị n'elu na ndị ọzọ. Ikpo okwu a na enyere ndi mmadu aka n’enweghi ihe omuma ma obu ikike banyere imeputa ngwa nke aka ha.
Ọ na-enye ọtụtụ atụmatụ maka n'efu yana dịka akụkụ nke atụmatụ ọnụ ọnụ. Ikpo okwu na-elekọta ihe niile na azụ. Yabụ, ndị ahịa ha agaghị etinye ego ọzọ na ngwaọrụ ọ bụla ma ọ bụ teknụzụ iji nọgide na-arụ ọrụ ngwa ha.
Ngwa Swing2 Onye Okike ihe eji eme ihe na-enye ndị ọrụ ohere imelite ngwa ahụ n'ụzọ kachasị mfe. Ka anyị lelee atụmatụ ndị ọ na-enye n'ụzọ zuru ezu -
Uru nke Swing2App Codeless Mobile App Building
Mmepe-enweghị ihe egwu - Ọnweghị koodu nyiwe ngwungwu koodu na-enye ohere maka ịnwale na atụmatụ ngwa mkpanaka gị. Nwere ike ịmepụta MVP mbụ iji lelee mmiri, ya bụ, ka ị hụ etu ndị mmadụ si anata ngwa ngwa mkpanaka gị. Ọ bụrụ na nzaghachi ahụ dị mma, ịnwere ike ịmalite ịmepụta ngwa ejiri ọdịnaya ndị dị mkpa. Wayzọ a, ị na-agaghị etinye nnukwu ego nke ego na ngwa echiche nke nwere ike ma ọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ.
Ọnụ ọnụ - SMEs na mmalite n’ozuzu ha enweghị nnukwu ego iji tinye ego na mmepe ngwa na mbido. Kama ị na-achọta ma na-etinye ego puku kwuru puku dollar, usoro ihe eji emepụta ngwa ngwa na-enye ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ ọnụ na DIY obibia. Na-enweghị iku otu ụlọ ma ọ bụ na-enyefe ndị na-emepụta ihe dị oke ọnụ, ndị mmepe, na ndị nyocha, ndị ọchụnta ego nwere ike ịmepụta ngwa na nnukwu UI na-enweghị usoro koodu.
Belata Oge Na-Ahịa - A kwesiri ibute echiche ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ahia. Ọ bụrụ na ọ bụghị, onye ọzọ nwere ike izu egbe egbe. Yabụ, kama ọnwa, ị nwere ike ịmepụta ngwa na awa ole na ole na max na enweghị koodu nyiwe. Swing2App nwere usoro mmụta mmụta dị mfe, yabụ ị ga-enwe ike iji ya mara oke mma n'oge na-adịghị anya wee bido ngwa ngwa ngwa ngwa karịa ndị asọmpi ahụ.
Akụkụ nke Swing2App Codeless Mobile App Builder
Ntughari nkwuputa - Ntugharị nkwupụta bụ nnukwu ngwá ọrụ iji nyere aka jigide njikọ aka na ngwa gị ma bulie ọnụego njigide. Na-enweghị ngwá ọrụ a, ngwa gị agaghị enwe ike imelite ndị ọrụ gbasara ihe ọ bụla, si otú a belata mbikọ ahụ nke ukwuu. Ihe dị mma bụ, ịnwere ike iwebata atụmatụ a n'ime ngwa gị ejiri ngwa mmepe ngwa Swing2App mee.
CMS - Ngwa chọrọ usoro njikwa ọdịnaya jikwaa nke ọma iji jikwaa ọdịnaya na ngwa ahụ. Swing2App na-enye atụmatụ a na Portal port nke ngwa ahụ.
Customizable ndebiri - Ikpo okwu na-enye otutu ndebiri ndebiri di iche iche nke onye okike nwere ike imeputa dika o choro. Ndị ndebiri a kwụsiri ike na egosighi nsogbu ọbụlagodi mgbe ejiri ngwa ahụ maka ezigbo oge.
Ngwa Popups - Mee ka ohere ịkwọ ụgbọala tinye aka site na ịgbakwunye popups mmekọrịta na ngwa mkpanaka gị.
Nchịkọta - ịghọta omume njirimara site na iji enyemaka nke njirimara a. Nwere ike ịtụgharị omume ndị ọrụ na ọnụ ọgụgụ gbasara ihe ndị ọrụ dị ka, ndị na-adịghị amasị, yana na ngwa gị. Nke a na-enye aka n'ịmepụta mkpọsa ezubere iche na imeziwanye ọrụ.
Tọghata Websaịtị An App - Ọ dị mma karịa ma ọ bụrụ na ịnwe websaịtị. Nwere ike ijikọ ya na ngwa mkpanaka na-arụ ọrụ nke ị mepụtara site na weebụsaịtị gị.
Ọ No-Usoro App Development Ọdịnihu?
Ka anyị na-ekepụta ihe ọhụụ kwa ụbọchị, ngwanrọ mmepe ngwa ga-eru ọkwa ọzọ. Ka oge na-aga, anyị kwenyere na ngwa ngwa ngwa ngwa ọ bụla ugbu a ga-arụ ọrụ site na enyemaka nke teknụzụ na-apụta wee bụrụ akụkụ dị nso nke teknụzụ mmepe ngwa.
Bido Iwulite Ngwa Ngwa Ekwentị Gị
Ngosipụta: Ana m eji nke m Ngwa Swing2 Mgbakwunye njikọ na edemede a.
Tags: ngwa igweandroid ngwa na-ewu ụlọonye wuru ngwaapụl ngwa na-ewu ụlọenweghị kooduios ngwaiPhone ngwa na-ewu ụlọmobile ngwamobile ngwa na-ewu ụlọenweghị koodu